Iphuciwe, ngaphambi noma ngemuva? | Amadoda aSitayela
Yiba nekilasi | | Kugundiwe, Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu
Namanje, ngekhulu le-XXI, kukhona labo abangenasiqiniseko sokuthi sinini isikhathi esifanele sokugunda, ngaphambili o ngemuva kusuka eshaweni. Abavikeli bendlela ngayinye banezinzuzo zabo ezilungiselelwe ukuvikela ekuhlaselweni kohlangothi lwembangi. Abanye bathi uma ukwenze ngaphambi kokunikeza isikhathi esithe xaxa sokuthi kuphole amanxeba nesikhumba sivuselelwe ngamanzi. Abanye ukuthi ngale ndlela isikhumba silungisiwe, ukuthi izinwele zithambile ... Kodwa, Ngempela uyini umzuzu ophelele?
Kuhle njengayo yonke into, ayikho eyodwa ephelele. Yize kuyiqiniso ukuthi ukukwenza ngemuva kokugeza kulungisa isikhumba, le nqubo ingenziwa futhi "yomile". Isihluthulelo sithi lungisa isikhumba nezinwele ngaphambi kokushefa. Uma sikwenza ngaphambi kokugeza, kufanele sisebenzise okhilimu, owoyela noma imikhiqizo elungisa isikhumba. Uma, ngakolunye uhlangothi, sikwenza kamuva, ishawa uqobo seluvele luthambise izinwele ngokwanele futhi amanzi ashisayo avule izimbotshana.
Ngikucacisa, emva kokugeza. Ngalokhu futhi ngangezelelwa ekusetshenzisweni kwejeli ekhipha amafutha, ngiba nesikhumba ezimeni ezifanele zokushefa. Nawe, Uyini umzuzu wakho owuthandayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Iphuciwe, ngaphambi noma ngemuva?
Ngihlala ngishefa ngemuva kweshawa, kwesinye isikhathi bengikwenza ngaphambili, futhi umehluko ubonakala kakhulu uma ukwenze ngemuva kwalokho, ikakhulukazi uma kusebusika futhi ugeza ngamanzi ashisayo, izinwele ziba lula futhi ukushefa kuba lula kakhulu.
Ngendlela, ngisanda kunquma ukushintsha ijeli lami lokushefa. Ngaphambi kokuthi ngihlale ngisebenzisa ukhilimu, futhi njengoba ngisebenzisa ijeli yeGillette ngijabule, kepha nginqume ukushintsha ngolunye usuku futhi nginoNivea, futhi kubi kakhulu! Ngemuva kokushefa senginokubomvu engingazange ngibe nakho ngaphambili nenye i-gel, kungani ngikushintshe?
UJose martin kusho
Ngihlala ngiqeda ukugeza !! futhi njalo ngejeli !!
Phendula uJose Martín
Yebo, iqiniso, Héctor, kuzodingeka ungiluleke ngalezi zinkinga, ngoba yize ngihlala ngifuna imininingwane ephathelene nokukhethwa kwemikhiqizo, nginokungabaza emoyeni.
Njengamanje ngisebenzisa isikhuhli sokushefa ngaphambi kwesikhathi, kanye nomuthi wokuthambisa umzimba ngemuva kwalokhu.Ngaphezu kwale mikhiqizo, ngisebenzisa iL'oreal Hydra Energetic entanjeni yamehlo, nokhilimu wesandla weNeutrogena. Noma kunjalo, ngiphuthelwa ukuthambisa umzimba okuhle nobuso. Ngakho-ke ngizibeka ezandleni zakho kusukela manje kuqhubeke, bopha umlingani wami !!!
UJavier R, kusho
Yebo, ngicabanga ukuthi ukulungiselela isikhumba ukuze kushefe kahle kubalulekile, okwenziwa ngendlela engajwayelekile ngeshawa esishisayo uyakwazisa uma kuziwa ekusebenziseni izindwani ezicijile zeseva yabo, yize kunezinye izindlela ezisebenza kangcono. Ngizokutshela iqhinga elihle kakhulu:
- Sebenzisa ijeli noma igwebu ngaphambi kokushefa, mayikusebenze imizuzu embalwa.
- Bese sigunda.
- Futhi ekugcineni ishawa enhle, enejel yobuso esipha amanzi kahle kakhulu, lokhu kuzovala amanxeba okungenzeka ukuthi sesiwavulile, sizophinde sibe nesikhumba esinamanzi amaningi, futhi uma kubonakala kukuncane, zama ukuzinika okokugcina «Ukubuyekeza» ngamanzi abandayo, lokhu kuvala izimbotshana, futhi kuzonikeza nezinwele zakho ukukhanya okungokwemvelo kakhulu.
Ekugcineni, nina enikhuluma ngokusebenzisa i-exfoliator, ngithemba ukuthi anikwenzi nsuku zonke, kanye ngesonto kungaphezu kokwanele, ngoba kubi kakhulu esikhunjeni.
Ngiyakwenza lapho iwa, iqiniso liwukuthi, ngokuvamile njalo emavikini ama-2 noma ama-3 ... izinzuzo zokuba nentshebe efanayo ebenginayo ku-14 xD
Ngokubhekisele ekulungiseleleni isikhumba. Kunezithambisi ezithambisa izinwele (ngake ngazisebenzisa kwaNivea esikhathini esedlule kanti iqiniso ukuthi kukhona okubonisayo). Uma uphuca ekuseni bese ukugqoka ebusuku noma okuphambene nalokho.
Bese igwebu noma ijeli? Hhayi-ke, inqobo nje uma ingekhwalithi akunandaba (ngiyavumelana ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nolwewolintshi, iNivea ishiya ifiseleka kakhulu maqondana nejeli nefovu). Ngangivame ukusebenzisa eyodwa eyayithengiswa emakhemisi futhi yayimangalisa. Manje, angazi nokuthi kungani, sengishintshele kuGellette gel.
Carlos, ngikweluleka ukuthi usebenzise ijeli yokugeza iJuba (engilithandayo) noma iPalmolive NB njengesithambisi somzimba, yikhona okunika imiphumela emihle kakhulu. Isithambisi sobuso, ngenani lemali elifanelana kahle nezimpawu zakho ze-L'Oreal.
I-PS: Javier, wena njengenhlalayenza ku-XDDDD yakho
ILongines GrandeVitesse, isusa ubukhosi enganekwaneni.
I-gucci, ukunethezeka kwedijithali